Turkiga oo sheegay in uu dhiirigelinayo midnimada iyo wadajirka dhinacyada Falastiin – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Turkiga oo sheegay in uu dhiirigelinayo midnimada iyo wadajirka dhinacyada Falastiin
Wasiirka Arimaha Dibadda Dalka Turkiga ayaa soo dhoweeyay kulan maalinimadii shalay dhexmaray Madaxweynaha reer Falastiin Maxamuud Cabaas iyo hoggaanka qeybaha Bulshadaasi ee gudaha iyo dibadda.
Kulankaan ayaa looga hadlay sidii looga hortagi lahaa qorshayaasha Israel ee ay dooneyso in ay la wareegto deegaano hor leh ,waxaa qadka Internetka uga qeybgalay Madaxda ku sugan Ramallah iyo Beirut.
War-murtiyeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa lagu sheegay ahmiyadda iyo mudnaanta howlaha dib-u-heshiisiinta iyo dhiirigelinta qadiyadda reer Falastiin,waxaana intaa la raaciyay inTurkigu uu sii wadi doono inuu dhiiri gelinta dadaalka loogu jiro gaaritaanka midnimada iyo wadajirka dhinacyada Falastiiniyiinta.
Maamulka Falastiin iyo kooxaha wax iska caabinta ayaa cambaareeyay heshiiska Imaaraatka iyo Israa’iil, waxayna sheegeen inuusan u adeegeynin qadiyadda Falastiin ayna iska indha tirayaan xuquuqda Falastiiniyiinta.
Previous articleQorshaynta Dhulka Danta Guud Oo Laga Bilaabay Laascaanood
Next articleSidee ayey Dadku uga faa’iideystaan Baraha Bulshada?
Wasiirka ciyaaraha Somalia Khadiija oo diidey in laga baadho coronavirus
Iiraan oo gantaallo ku duqeysan saldhigyada ciidamada Mareykanka